'' Qaladkii Ugu Waynee Ee SNM Gashey ''.
Tuesday February 23, 2021 - 15:14:12 in Articles by Hadhwanaag News
Maxamed Xaashi Diiriiye wuxuu ahaa nin Engineer ah oo ku takhasusay samaynta Taangiiyadda Dagaalka xirfadiisuna waxay ahayd Machanical Engineer , sidoo kale wuxuu ahaa macdanta ama guluubka ay kusoo hiranayaan snm iyo dadka snm taageeraaba .
Dhinaca kale , Axmed Maxamed Guutaale wuxuu ahaa Engineer ku takhasusay Hubka , haday ay tahay samayntiisa , dayactirkiisa iyo hal-abuurkiisa, waxaanu ahaa sarkaalka keliya ee aqoontaa bartay ee Snm haysatay .
Labadaa sarkaal ee qaaliga ah , labaduba waxay ku geeriyoodeen dagaalo snm gashay isagoo mid waliba madax ka ah Ciidamo kooban oo uu hogaaminayay , Burco-duurey iyo Ina Guuxaa .
Qadarka Rabbi waa halkiisa , laakiin waxay ahayd in saraakiishaa aan la gelinin dagaal maadaama aan xirfaduuduba ahayn daagal saraakiil badan oo dagaalka dhulka baratayna snm haysatay , snm ay saraakiishaa uga faa’idaysato xirfad ahaan iyo siyaasad ahaan .
Si kastaba ha ahaatee , aqoontii saraakiishaasi lahaayeen maanta waa mid Aduun waynuhu ka markhaati furey oo ku qorantay bogaga taariikhda .